LA COUNTY – VACCINE ROLL OUT CAMPAIGN | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » LA COUNTY – VACCINE ROLL OUT CAMPAIGN
LA COUNTY – VACCINE ROLL OUT CAMPAIGN
Posted by kai on Aug 25, 2021 in Contributor, Columnist, Myanmar Gazette, Opinion - Op-ed |0comments
လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ကောင်တီမှ အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံသောသတင်းစကား။
COVID-19 (ကိုဗစ်-၁၉ ) ဆေးစစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်တစ်ဦး၏မှတ်စု။
Dr. Erika Flores Uribe, လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ကောင်တီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများဌာန။
COVID-19 (ကိုဗစ်-၁၉ )ဆေးစစ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်အတွက် ရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုတားဆီးဖို့ရာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံကူညီသလဲ။
COVID-10 (ကိုဗစ်-၁၉) ဆေးစစ်ခြင်းအားဖြင့် အကယ်၍ သင့်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေသည်ဆိုပါ သင့်အားသိရှိရန်ကူညီပေးပြီး သင့်မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို မပျံ့နှံ့မကူးစက်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အကယ်၍ ဆေးစစ်ချက်သည် ပေါ့စတစ်/ရောဂါပိုးရှိသည်ဟုဆိုပါက သင်ကတဆင့်အခြားသူများကို မပျံ့ပွားမကူးစက်စေရန် သီးသန့်ခွဲနေပါ။ သင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကသူများကိုလည်း သူတို့တတွေလည်း သီးသန့်ခွဲနေရောဂါခြေချုပ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် သင့်မှာရောဂါပိုးရှိကြောင်းကို သူတို့အား သိရှိပါစေ။ အဆိုပါနည်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့ပွားကူးစက်မှုကို ရန်တန့်စေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အနာဂတ်မှာ COVID-19(ကိုဗစ်-၁၉)ရောဂါတဟုန်ထိုးဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
COVID-19 (ကိုဗစ်-၁၉)ဆေးစစ်မှု နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဟာ တိကျတဲ့အဖြေရရှိမှုမှာ ကွာခြားကြပါသလား? ထိုသို့ဆိုပါက ဘယ်ဆေးစစ်နည်းက အကောင်းဆုံးလဲ?
COVID-19 (ကိုဗစ်-၁၉)ဆေးစစ်နည်းအဓိက၂မျိုးရှိပါသည် : မော်လီကျုးဆေးစစ်နည်းများ– ယေဘုယျအားဖြင့် “PCR tests (ပီစီအာ)ဆေးစစ်ခြင်းများ” – သည် ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုတိကျပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာအဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပြီး သင်တို့ဟာအဖြေတွေကို ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ရရှိပါမည်။ Antigen tests (အန်တီဂျင်ဆေးစစ်ခြင်းများ) – သည် တခါတရံ “rapid tests အမြန်ဆေးစစ်ခြင်း” များဟုခေါ်ကြပြီး – ဘယ်နေရာမှာမဆို ပြုလုပ်စစ်ဆေးနိုင်ပါပြီး သင်တို့ဟာ အဖြေများကို မိနစ်၂၀အတွင်းမှာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA) က ရောဂါကိုဖော်ထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းဖို့ ရက်ပေါင်းများစွာမှာ အန်တီဂျင်ဆေးစစ်ခြင်းကို အထပ်ထပ်အခါခါပြုလုပ်ကြဖို့ ညွှန်းဆိုထားပါသည်။
နောက်ထပ်သတိပြုရန်မှာ- COVID-19(ကိုဗစ်-၁၉)ဆေးစစ်နည်း ဘယ်နည်းကိုပဲသုံးသုံး သင်ဟာ တိကျမှန်ကန်တဲ့ဆေးစစ်ချက်အဖြေများကိုရဖို့အတွက် သင်ဟာ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့သင့်ကိုယ်ခန္ဓာက
ဆေးစစ်မယ့်ပစ္စည်းကို ပေးကိုပေးရပါမည်။ အကယ်၍ လေ့ကျင့်ပေးထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းက အရည်အသွေးကောင်းတဲ့သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကဆေးစစ်မယ့်ပစ္စည်းကို
ယူသည်ဆိုပါက ယင်းသို့ပြုလုပ်ခြင်းဟာ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့နမူနာပစ္စည်းကိုရဖို့ ကူညီပါလိမ့်မည်။အကယ်၍ သင်ဟာ သင့်နှာခေါင်း(သို့မဟုတ်) အာခံတွင်းတို့ဖတ်ကို သင်ကိုယ်တိုင်ယူသည်ဆိုပါက ညွှန်ကြားချက်များအားလုံးကို ဂရုတစိုက်လိုက်နာဖို့ သေချာပါစေ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဆရာ၉န်ဆေးခန်းက COVID-19(ကိုဗစ်-၁၉)ဆေးစစ်ခြင်းတွေမပြုလုပ်ပေးဘူးဆိုပါက(သို့မဟုတ်)ကြိုတင်ရက်ချိန်းမရနိုင်ဘူးဆိုပါက ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုဆေးစစ်ရမလဲ?
အကယ်၍သင်ဟာကြိုတင်ရက်ချိန်းမရနိုင်ဘူးဆိုပါက(သို့မဟုတ်) သင်ဟာ သင့်ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုပါက အင်တာနက်စာမျက်နှာ covid19.lacounty.gov/testing မှာ သင်နဲ့နီးတဲ့နေရာက အခမဲ့ဆေးစစ်တဲ့နေရာကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရဖွင့်ထားတဲ့ ဆေးစစ်တဲ့နေရာတွေမှာ ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူဖို့မလိုဘူးဆိုသော်ငြားလည်းပဲ သင်ဟာ ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူခြင်းအားဖြင့်စောင့်ဆိုင်းရခြင်းကို လျော့နည်းစေပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ဟာ COVID-19 ကိုဗစ်-၁၉ကာကွာ်ဆေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုပါက ကျွန်ုပ်မှာရောဂါလက္ခဏာတွေမရှိရင်တောင်မှ ဆေးစစ်ချက်လုပ်သင့်ပါလား?
ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနများThe Centers for Disease Control and Prevention (CDC) က မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ရောဂါလက္ခဏာစမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်များရှိသော မည်သူမဆို ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည်ဖြစ်စေ၊ မထိုးရသေးသည်ဖြစ်စေ၊ (သို့မဟုတ်) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးယခင်က ကူးစက်ခံရပြီးသူဖြစ်ဖြစ်ပါစေ ဆေးစစ်ရန်ကို ညွှန်ကြားထားပါသည်။ နောက်ပြီး မမေ့ပါနဲ့- သင်ဟာကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည်ဆိုတာတောင် COVID-19(ကိုဗစ်-၁၉)ရောဂါရှိနိုင်သူ၊ သို့မဟုတ် COVID-19(ကိုဗစ်-၁၉)ရောဂါရှိကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးသူတစ်စုံတစ်ဦး သင့်အနီးအနားမှာ ရှိနေပါက ထိုသူနဲ့တွေ့အပြီး ၃ရက်မှ၅ရက်အတွင်း သင်ဟာ ဆေးစစ်ခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။